Ịgagharị Malta site n'onwe Yacht
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ịgagharị Malta site n'onwe Yacht
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ okomoko • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
LR - Ọdụ Mgarr, Gozo, Malta; Valletta si Yacht; Msida Yacht Marina © Viemalta.com
Enweghị ụzọ dị mma ma dị nchebe iji chọpụta ọmarịcha osimiri dị na Mediterenian karịa na njikwa ụgbọ mmiri nkeonwe, malite na Malta! Agwaetiti Maltese, nke nwere agwaetiti atọ, Malta, Gozo, na Comino, bụ ebe dị mkpa maka akwụkwọ ụgbọ mmiri okomoko.
Grand Harbor Marina dị na etiti Valletta, ọdụ ụgbọ mmiri akụkọ ihe mere eme nke Malta, isi obodo ya na saịtị UNESCO World Heritage. Ezigbo ebe ịmalite njem ezumike, Valletta, 2018 European Capital of Culture, bụ obodo mara mma nke nwere ọtụtụ saịtị akụkọ ihe mere eme, ụlọ nri n'èzí na ndụ abalị na-atọ ụtọ.
Inyocha ụgbọ mmiri Maltese site na ụgbọ mmiri dị ka ịnyagharị site na afọ 7000 nke akụkọ ntolite. N'ihe dị ka kilomita 122 nke Coastline, oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ nke Malta na-enye ndị ọbịa ohere ịnụ ụtọ osimiri ndị mara mma, ọtụtụ mmiri mmiri, nnukwu ọgba na ọgba. A makwaara Malta dị ka otu n'ime ebe mmiri na-egwu egwu kachasị elu n'ụwa, nwere akụ akụ na ụba mere eme iji chọpụta. Otu nwere ike isi na Valletta bilie n'isi ụtụtụ, gafere obodo atọ ahụ na mgbidi ya ndị mere eme, na-enwe mmasị na ọnụ ọnụ ugwu ndị a na-adịghị ahụkebe ka ụgbọ mmiri ahụ na-aga n'àgwàetiti nwanne Gozo na Comino. Agaghị echefu Gozo bụ ụlọ nsọ Ġgantija, saịtị ọzọ UNESCO. Na Comino, ndị ụgbọ mmiri nwere ike ịnụ ụtọ igwu mmiri na Blue Lagoon a ma ama. E nwekwara ọtụtụ marinas ịhọrọ site na Maltese Islands dị ka Msida Yacht Marina, Mgarr Harbor, na Vittoriosa Yacht Marina. Ma ọ bụ nke ka mma, Captain ahụ nwere ike ịchọta ebe zoro ezo na dobe arịlịka.
Yacht Charter Nchedo
Yacht ichata ụlọ ọrụ na-aga ebe dị ogologo iji hụ na yachts bụ kpamkpam mma. Yagbọ mmiri ahụ kwalitere usoro nhicha na usoro ịdị ọcha ha ugbu a ma na-etinye usoro iwu ọhụụ iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa na ndị ọrụ ha. Usoro iwu ndị a gụnyere ịgbatị oge ntụgharị n'etiti eserese iji nye ohere maka nhicha sara mbara, na-anwale ndị ọrụ oge niile, yana ịhapụ ndị ọrụ na-agbagharị agbagharị tupu ha abanye n'ụgbọ mmiri ahụ. Kemgbe ọnwa Julaị 15, ebupụla mmachi ụgbọ elu mba niile na Malta. Enwere ike ịchọta ndepụta nke ebe akwadoro Ebe a.
Ndị isi ahụ ike nyere ndụmọdụ na site na July 1st, a ga-ahapụ ndị ọrụ gbanwere gaa na Malta maka ndị mmadụ, gụnyere ndị ọrụ, na-eme njem site na ndepụta nke mba dị ka edepụtara na Iwu Banyere Njem. Dr. Alison Vassallo, Onye isi oche nke Yachting Services Business Section, kwuru na "Eziokwu ahụ na Malta enwetawo otuto mba ụwa maka mmeghachi omume ya na mbenata nje ahụ pụtara na anyị nọ n'ọnọdụ ịnabata ụgbọ mmiri azụ n'ụsọ mmiri anyị ma hụ na nrube isi site n'usoro mgbochi ndị Ọchịchị kwadoro. ”
Malta emepụtawo otu broshuọ dị n'ịntanetị, nke gosipụtara usoro nchekwa na usoro nchekwa niile nke gọọmentị Maltese etinyebere maka ụlọ oriri na nkwari akụ niile, ụlọ mmanya, ụlọ nri, klọb, ụsọ mmiri dabere na nleghara anya mmekọrịta na nnwale.